Qoraa Abdijabar Sh. Ahmed oo wax ka qoray nuxurka Buuga Collapse iyo faa’iidooyinka ay ka heli karaan Soomaalida. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Qoraa Abdijabar Sh. Ahmed oo wax ka qoray nuxurka Buuga Collapse iyo...
Qoraa Abdijabar Sh. Ahmed oo wax ka qoray nuxurka Buuga Collapse iyo faa’iidooyinka ay ka heli karaan Soomaalida.
Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, qoraa Jared Diamond
Afsoomaali ahaan haddii aan iskudayo wuxuu noqonayaa – Burbur: Sidee Bulshooyinka u doortaan inay ku guuldareystaan ama ku guuleystaan.
Xagee dunida ay ku dambeyn doontaa?
Reer galbeedka waxay isweydiinayaan Dimuqraadiyaddu ma sii jiri doontaa?
Maxaa laga qaban doonaa burburka deegaanada?
Dabcan, adduunku waa shabakad isku dhafan, oo marka la dhiso halxiraalahaas oo keliya ayaad fahmi kartaa sida ay u shaqeyso.Waa ka buugga kaa caawin kara inaad kala furfurto shabakaddaas la isku xerxeray, isla markaana kuu iftiimin kara arrimaha taagan.
“Dheemanku waxa uu eedda saaraa inta badan arrimaha deegaanka, iyo go’aannada ay bulshooyinkani ka gaaraan dabeecadda ku hareeraysan.” – Wuxuu ka hadlayaa xaalufinta dhirta, burburka deegaanka, dhibaatooyinka ciida, iyo waliba maamul xumada guud iyo tirada dadka.
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran karo buugga:Xaalufinta deegaanka iyo hoggaan xumada bulshooyinka ayaa horseedi karta burburka bulshada.
Ku saabsan qoraha maqaalkaan
Cabdijabaar Sh. Axmed waa qoraa iyo tifatiraha guud ee majaladda Somalism.so wuxuuna wax ka qoraa maamulka, dhaqaalaha, falsafada, falanqeynta siyaasadda iyo diblomasiyada, horumarka bulshada iyo nabadgelyadda. Qoraaga waa qoraa dhawaanahan qoray buuggaag iyo qoraallo kala duwan oo aan dhanka wax tarka kala dhicin. Waxaay kala xariiri kartaa emayl: cabdijabaar@somalism.so iyo lambarkiisa Norway +47 45507363
Previous articleGudoomiyihii Maxkamadda ICJ asal ahaana Soomaali ahaa oo xilkii laga bedelay.
Next articleIlhan Cumar oo loo magacaabay xil muhiim ah (BBC)